Dhageyso: Warbixin Nin U Gefay Nabiga CSW iyo Ictisaam Oo Sheegay in AMISOM Musta'miniin Yihiin iyo Culimo Jawaabtay.
Wednesday September 20, 2017 - 11:07:32 in Wararka by Super Admin
Qaar kamid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay xukunka nin ku sugan magaalada Gaalkacyo oo meel uga dhacay sharafka Nabigeena Muxamad صلي الله عليه وسلم ninkaas oo sawirka nin kale ku tilmaamay inuu Nabiga yahay!
Culimada Ictisaam ee ka hawl gala Puntland wali wax war ah kama soo saarin ninkan ku xad gudbay cirdiga Nabigaصلي الله عليه وسلمtaa badalkeedana waxay amaaneen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay wadanka iyagoo ku sheegay mus’ta’miniin (dad magan galyo la siiyay).
Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbineynaa warbixin aanu ka diyaarinay wareysiyo iyo cadad kala duwan oo qeyb ka ahaa barnaamijka Dhuuxa wareysiyada.
Kani waa ninkii nabiga csw u gefay
Sh/C/Naasir oo (Ictisaam) katirsan
Sh/Cismaan Laangarre (Ictisaam)
Xassan Sh/Cali Warsame (Ictisaam) waa ninka yiri’ Amisom waa musta’miniin!
Sh/Jaaamc C/salaam culimada ka jawaabtay ninka nabiga csw u gefay iyo warka Ictisaam (Mujaahid Da’ah)
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta